Herisetra mampivarahontsana Notifirina teo amin’ny vavany ilay tovolahy
Tovolahy iray naratra mafy no tonga nanatona tao amin’ny sampana vonjy taitran’ny Hopitaly Tsiroanomandidy ny marainan’ny talata 24 desambra teo.
Potika tanteraka ny vavany, izay voalaza fa nisy nitifitra tamin’ny basim-borona ka izay no tsy maintsy nanatonany ny "Urgence" tao amin’ity hopitaly ity. Fitsaboana vonjimaika ihany no vita tao Tsiroamandidy satria tsy maintsy tohizana aty an-drenivohitra ny ratra. Soa ihany fa tsy namoy ny ainy ilay tovolahy ary mbola nahatsiaro tena tsara. Niantso sy nanaitra ny tsirairay ny mpitsabo ao Tsiroanomandidy mba samy hahay hifandefitra fa tsy hifandratra sy hifamono toy izao ny samy Malagasy. Izy ireo no naka alalana manokana tamin'ny fianakaviana ka namoahana ny sarin’ity tovolahy ity mba hanairana sy hanentanana ny tsirairay samy hiady amin'ny herisetra. Tsy fantatra mazava izay tena anton’ny tsy fifankahazoana nitarika izao herisetra goavana izao. Raha ny fahitana sy ny fanombanana azy, dia sady matanjaka no nofosana mety afaka niaro tena ihany ity tovolahy ity, saingy sendra ny atody niady tamam-bato ihany teo anatrehan’ny fitaovam-piadiana nahery vaika nanoloana azy. Na inona na inona mety ho antony, heloka sy helohin’ny lalàna ny fandratrana sy mety fifofoana aina mihitsy aza, saingy tsy tanteraka. Irariana mba ho sitrana soa aman-tsara ity tovolahy ity, ary mba ho tratra ihany koa izay nahavanon-doza.